Semalt: Making of Email Marketing Without Back Hat Techniques
Zava-dehibe ny misoroka ny tady mainty hoditra rehefa tonga amin'ny mailaka mailaka. Ny manam-pahaizana momba ny SEO sasany dia nametraka ny fepetra sy fepetra momba ny fomba hanaovana izany, raha mbola tsy fantatry ny mpividy SEO tsy manana traikefa ny fomba fandraisany ny orinasany amin'ny ambaratonga manaraka. Ireto ny teboka dimy natolotr'i Igor Gamanenko, Semalt Manager Success Manager, izay tokony hotadidinao hahazoana antoka ny fiarovana an-tserasera anao.
Mialà eo amin'ny Craigslist:
Ilaina ny miala amin'ny craigslist raha te hahomby amin'ny Internet ianao. Craigslist dia lasibatra mahatsikaiky ho an'ny mpitsabo mainty hoditra SEO sy mpivarotra mailaka, saingy manana mpisolovava izay mety hitarika anao any amin'ny fitsarana raha toa ianao ka tafiditra ao anatin'ireo hetsika tsy ara-dalàna.
Raha mbola afaka mamorona kaonty voamarina an-tapitrisany ianao ary manana adiresy IP be dia be, dia tsy tokony hiantehitra amin'ny craigslist na oviana na oviana ianao satria mety hitatitra anao amin'ny motera . Tokony ho sambatra ianao raha nanatsara ny laharam-pahefanao nefa tsy nandray anjara tamin'ny hetsika tsy ara-dalàna.
Manaisotra olona tsy fantatra anarana
Ny olona tsy fantatra anarana dia mety manimba ny lazanao eo amin'ny aterineto. Manao mailaka an-tserasera ianao, ary ataovy izay azonao atao mba hisorohana azy ireny sy hanakana ny adiresy IP tsy ho ela. mailaka satria izy ireo no mangalatra ny mombamomba anao manokana ary mamotika ny mombamomba ny media sosialy.
Mialà eo amin'ny radara
Tsy mety ny milaza fa ny fangatahana handefa mailaka maro avy amin'ireo server tsy fantatra na firenena toa an'i India na Rosia dia mety hamaha olana ho anao. Izany no mahatonga anao tsy tokony hampiasa ny adiresy IP amin'ireo firenena ireo raha mandefa mailaka amin'ny mpanjifanao na lisitry ny olona. Tokony haka an-kalamanjana ny radara ianao amin'ny fanafenanao ny adiresy IP anao mba tsy hisy olona hamitaka anao na hanakiana anao amin'ny fomba rehetra.
Fahadisoana very (VPS)
Mahafinaritra ny mampiasa mpizara VPS na mpiasan'ny fahasalamana mifototra amin'ny zavatra takinao. Saika ny olon-drehetra amin'ny mpandraharaha ara-barotra sy ny tambajotra sosialy, ary koa ny mpizara dizitaly, dia mampiasa VPS na serikany manokana raha mandefa mailaka noho ny antony fampiroboroboana. Raha anisan'izy ireo ianao, dia tsy tokony handray anjara amin'ny dokambarotra mailaka mainty hoditra ianao raha hamorona olana ho anao sy ny orinasanao amin'ny aterineto.
Aza adino velively fa ny mailaka mailaka mainty dia miasa mandritra ny andro vitsivitsy. Nefa miaraka amin'izany, tsy afaka miteraka fitarihana ianao ary tsy afaka mahazo vola betsaka amin'ny orinasanao an-tserasera. Ny paosin'ny mainty mailaka dia tsy azo itokisana ary tsy afaka manome antoka ny fahombiazany. Izany no antony tokony handoavanao tsara ny fifantohana amin'ny mailaka mivantana amin'ny mailaka sy ny fahaiza-manao amin'ny media sosialy. Haka fotoana kely izany, saingy mahavariana ny vokatra ary mandritra ny androm-piainana. Ho an'ireo orinasa madinika sy lehibe, dia tsy maintsy atao ny mifidy teknika fotsy, ary tsy tokony handalo velively na oviana na oviana ny satroka mainty raha tsy te-hiditra amin'ny sazy an-tserasera ianao Source .